Modern izinto energy esisindisa uvumele cishe njalo balimi amateur ukwakha umhlaba wakhe greenhouse ebusika, ngisho endaweni encane, kodwa inzuzo kwezomnotho.
Omunye wemisebenzi ezenza kube - abamba ukushisa thermos. Izindonga kulendlu - inhlokodolobha, basuke ezakhiwe ngezitini noma ukhuni bese bakha sikwele obuphelele uhlangothi 4 amamitha. Leli fomu anginikhethanga ngengozi, ngoba isilinganiso owesincane Imininingwane udonga endaweni endaweni ingqikithi zokugcina, okuyinto kunciphisa ukushisa ukulahlekelwa. Ngaphakathi kuwo sheathe nangokuvikela enamathela we iphathwa aluminium ucwecwe of polyethylene foamed. Lokhu enamathela usebenza like thermos - ibonisa ukushisa emisebeni nokukhanya kule abamba ukushisa, umphumela omkhulu kunayo yonke kuba yipumelelo lokha une ukuthambekela encane izindonga ngaphakathi.
Uma emhlabathini, lapho kucatshangwa ukwakhiwa kwalesi sakhiwo, etafuleni amanzi uphansi abamba ukushisa ngokwanele okuzenzela kungenziwa lalihlehliswa ku umhlaba cishe 1 imitha. Ukungena ekamelweni kumele ifakwe Umpheme ngezicabha zangaphakathi nezangaphandle. Ngaphansi kophahla, phezu kwezicabha nasezinsikeni ngakolunye uhlangothi ngenhlonipho egumeni kufanele usethe transom camera lezinyosi polycarbonate, ngoba umoya omncane lapho izinga lokushisa likhuphuka phezu isicelo wemithetho.
Uphahla eyenziwe ngepulasitiki tube nge ububanzi 4 kuya ku-6 ngamasentimitha. Kusukela ipayipi ukuze ipayipi udinga ukushiya okungenani eyodwa elilodwa amamitha nengxenye. Phezu kwalezi amashidi embondelene chetyrehmillimetrovogo polycarbonate, ububanzi 2.1 amamitha kanye ubude ngamamitha engaphezudlwana nje kwemihlanu. Amashubhu kanye emaphethelweni ophahla, kusekelwa spacers wenza isibonelo Foam ezindongeni elise enisemikhawulweni abamba ukushisa.
amapayipi Lesisemkhatsini kumele omiswe transverse esisuka of ngentambo ezacile nobe aminyene line ukudoba. Lezi izandiso kufanele ibekwe zonke imitha - nenxenye. Ukuze kuncishiswe ukushisa ukulahlekelwa NGOPHAHLA kusukela ngaphakathi amapayipi esebenzisa ngezikulufo kanye lokhuni glazing ubuhlalu noma yensimbi emapheshana enamathiselwe ngesinye isendlalelo polycarbonate. Phakathi kwalezi zinhlangothi zombili we ukwahlukanisa kuyinto wembozwe wumoya, sibonga ngalo uphendulela abamba ukushisa thermos engasindisa umnini wayo ngoba ingxenye enkulu kakhulu amandla for bafudumale.
Ukwakha kangcono uyigcine ndawonye "amapayipi polycarbonate-plastic", kusukela okuza sokwanda ezishisayo cishe okufanayo, futhi usinika ukuphila izakhiwo ezifana zokugcina thermos, uma kuqhathaniswa nabangu-inhlanganisela "iphrofayli polycarbonate-metal."
Izitshalo kulula ukhule emashalofini ekhethekile amabhokisi kanye nobukhulu 600h300h100 amamilimitha angu. Ukuze bahlangabezane nezidingo + zabo e amandla wokukhanyisa kwekwindla, ebusika kanye kwentwasahlobo zidinga izibani ezengeziwe lokuchibiyela usebenzisa izibani Fluorescent.
Lapho uhlela ukwakhiwa we abamba ukushisa, kubalulekile ukuba acabangele isidingo Ukushisa yayo. Ukushisa wayo ungaba isitimu kagesi, esithandweni, kanye ngokusebenzisa amandla omlilo oqondile Igesi yemvelo. Toeplitz-thermos ebusika esikhathini esiningi isehlane kusukela imvelo, ngakho dioxide carbon ukuthi ikhishwe ngesikhathi omlilo of-propane, butane, noma i-methane ingahambi kuphi futhi esetshenziswa izitshalo umzimba zabo. Omunye khetho yayiyobizwa amalahle isitoreji ukushisa kwamanzi, okuyinto evuthayo emini esebenzisa we sikaphalafini igesi, kanye ithumela ukushisa ngobusuku obubodwa etholakalayo.
Very ofanele abamba ukushisa Ukushisa somlilo "Bulleryan 00", amandla alo kwanele ngisho indawo enkulu kuka-16 square metres. Isetshenziswa njengesici fuel izinkuni imfucuza noma woodlogs hhayi wajinge wanamatsela, ubude esingeqile 350 amamilimitha angu. Ngefasitele kumele okungenani ibe 4.5 ubude futhi ube ububanzi amamilimitha angu hhayi ngaphansi kuka-120.
Ukutshalwa duck inyama ekhaya: imiyalelo ye-wakha ibhizinisi
Zharkov Aleksey: Biography, Filmography
Bint Martensa: ikhambi eliyisimangaliso ekhaya lakho